“कुर्सी र पदको लागी, जनताले, आन्दोलन गरिदिनु पर्ने कस्तो अचम्मको आब्हान हो :- सान्ता चौधरी – Dainik Sangalo
February 13, 2021 310
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपि ओलि को सासद विघटन लगैत्तै नेकपाकै एक समूह, बिभाजन भएर अहिले सडक मा आन्दोलन गर्दैछ।सरकार ले चालेका कदम हरु पर्ती असन्तुष्ट हुँदै नेपका प्रचण्ड,नेपाल् समूह अहिले आन्दोलन मा गएको हो”।
“नेपाका कि सांसद सान्ता चौधरी ले प्रचण्ड, नेपाल् समुह लाई बिगत एक बर्ष , देखिनै गरेका हर्कत ले र आफ्नो प्राभुत्त्व जमाउन न पाएको कारण अहिले यो अबस्थामा पुगेको आरोप लगाउनु भएको छ।
“प्रतिगमन, प्रतिगमन भन्दै बिरोधमा सहभागी बनौ भनेर एकथरी हाम्रो आदरणीय नेता कमरेडहरुले, जनतालाइ आब्हान गरेको सुन्दै छु,। सारा संसारलाइ थाहा छ वाहाहरु पद हडप्न र पार्टी र सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन नपाएको कारण बिगत एक बर्ष देखि के के हर्कत गर्नु भयो भन्ने कुरा। “तेही हर्कतका कारण हठात् रुपमा अविस्वासको प्रस्ताब लानु भयो, कपोलकल्पित, आरोपपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो, आस्थिरताका बीचमा आफ्नो भबिस्य देख्नु भयो। अहिले वाहाहरु को, कुर्सी र पदको लागी जनताले आन्दोलन गरिदिनु पर्ने कस्तो अचम्मको आब्हान हो” ?
Prevसापटी दिएको ४ हजार रुपैया तिर्न नसक्दा देवीकलाले ज्या, नै दि,नु पर्यो
Nextप्रदेश मात्रै होईन, अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज !
संक्रमित अध्यक्ष भन्छन् : मलाई त छि:छि दूरदूर गरे, अरुलाई कस्तो होला ?